မွန်ဂိုးလီးယားဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
မွန်ဂို [မှတ်ချက် ၁] သည် မွန်ဂိုလီးယား ၏ ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်ပြီး မွန်ဂိုလစ်ဘာသာစကားမိသားစုတွင် လူပြောအများ ဆုံးနှင့် လူသိအများဆုံးဖြစ်သည် ။ မွန်ဂိုလစ်ဘာသာစကားပြောသူ ၅.၂ သန်းရှိသည်။ မွန်ဂိုလူမျိုးများ နှင့် မွန်ဂိုနွယ်တိုင်းရင်းသားအများစုသည် တရုတ်
ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ီအတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနှင့် မွန်ဂိုပြည်တွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်တ် ။  မွန်ဂိုလီးယားမှာ Khalkha စကား သည်လက်ရှိတွင်နှစ်ဦးစလုံး၌ရေးထားလျက်ရှိ၏, Cyrillic နှင့် ရိုးရာလီး script ကို (နှင့်ထဲမှာအချိန်များတွင် လက်တင် များအတွက် လူမှုရေးကွန်ရက် အတွင်းမွန်ဂိုလီးယားအတွက်ဘာသာစကားကိုစဉ်), မြင်သာထင်သာဖြစ်သည် စကား ထက်ပိုသောကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အစဉ်အလာလီးဇာတ်ညွှန်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်။
အူလန်ဘာတာ မြို့ ဆုခ်ဘာတာ ရုပ်တုပေါ်မှ မွန်ဂိုအက္ခရာ နှင့် မွန်ဂိုစိလယ်ရစ်အက္ခရာ
↑ ၁.၀ ၁.၁ Estimate from Svantesson et al. 2005: 141.
↑ Törijn alban josny helnij tuhaj huul'။ MongolianLaws.com (2003-05-15)။ 22 August 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 August 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ The decisions of the council have to be ratified by the government.
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Mongolian"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မွန်ဂိုးလီးယားဘာသာစကား&oldid=718977" မှ ရယူရန်